मारुनिको दर्शक बढिरहेको बेला आजबाट हलमा निता ढुंगानाको ‘सोच’, व्यापार कस्को बढ्ला ? - www.dthreeonline.com
मारुनिको दर्शक बढिरहेको बेला आजबाट हलमा निता ढुंगानाको ‘सोच’, व्यापार कस्को बढ्ला ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २०, २०७६ समय: ८:४९:३५
ईटहरी/ हरेक शुक्रबार दुृई वा त्योभन्दा बढी नेपाली फिल्म एकसाथ प्रदर्शन हुने गरेकोमा यो शुक्रबार अर्थात् २० भदौमा भने एउटा मात्रै फिल्म-‘सोच’ प्रदर्शनमा आएको छ । तर अघिल्लो साता प्रदर्शनमा आएको फिल्म मारुनी ले यतिबेला शोहरु थपिरहेको छ । हलमा मारुनिको लागि दर्शकहरू थपिरहेको अवस्थामा निताको सोचमा दर्शक कति जालान त ? त्यो भने हेर्न बाकी नै छ । पूजन सिंह (प्रभाकर प्रकाश) को कथा र निर्देशन रहेको सोच देशभरका झण्डै ६ दर्जन हलमा एकल प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।
फिल्ममा नवनायक पूजनका साथमा प्रज्वल गिरी, नीता ढुंगाना, बिशाल पहाडी, सोनीका बास्तोला, किरण थापा, रितेश श्रेष्ठ, उत्तम केसी लगायतका कलाकार प्रमुख भूमिकामा छन् । फिल्म रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण पक्षले बिहीबार राजधानीमा प्रेस भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्यो । यही फिल्मबाट निर्देशन र अभिनयमा डेब्यु गरेका पुजनले ‘सोच’ प्रति आफू निकै आशावादी रहेको बताए । ‘मलाई मेरो फिल्मप्रति निकै आशा छ,’ उनले भने, ‘मैले धेरै
समयको अध्ययन,अनुसन्धान र योजनापछि फिल्म निर्माण गरेको हुँ ।’
निर्मात्री गंगा रजकले पनि फिल्मप्रति आफू आशावादी रहेको बताइन् । ‘सोचको ट्रेलर र गीतबाट जुनकिसिमको प्रतिक्रिया पाएका छौ, त्यसले हामीलाई अझ आशावादी बनाएको छ ।’ उनले फिल्मले पारिवारिक माहौलको कथा बोल्ने बताइन् । अभिनेता बिशाल पहाडीले ‘सोच’ मा आफू नकारात्मक भूमिकामा रहेको खुलासा गरे । ‘म नकारात्मक भूमिकामा छु,’ उनले भने, ‘मेरो चरित्रलाई परिस्थितिले नेगेटिभ थटको बन्न बाध्य बनाउछ ।’ उनले फिल्म राम्रो बनेकाले सबैले एकपटक हेर्नुपर्ने जिकीर गरे । ‘सोच’ रिलिजभन्दा केही दिनअघि अभिनेता प्रज्वल गिरी सपरिवार अमेरिका उडे ।
अभिनेत्री नीता ढुंगाना भने सम्पर्कमै आइनन् । तर पनि निर्माण पक्षले उनीहरुप्रति कुनै गुनासो गरेको छैन । ‘उहाँहरु जहाँ भए पनि आफ्नो तर्फबाट साथ दिनुभएको छ ।’ निर्देशक पूजनले भने । सोच फिल्मस् प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्सको ब्यानरमा निर्मित फिल्मको पटकथा र सम्वाद कृष्ण आचार्यले लेखेका हुन् भने फिल्ममा एनबि महर्जनको द्धन्द्ध, रामजी लामीछाने र प्रभाकर प्रकाशको कोरियोग्राफी, डिजे एलएक्सको संगीत र प्रितम पाण्डेको सम्पादन छ । बिदुर पाण्डेले खिचेको फिल्मको बितरण आरआर फिल्मस्ले गरेको हो ।